Nei Zvapupu zvaJehovha Zvichiparidzira Vanhu Vakamboti “Hatifariri Zvamunoparidza”?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bosnian Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiKaren (S'gaw) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitumbuka Chol Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish French Galician Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Javanese Kabiye Kachin Kazakh Kikamba Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Low German Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Nias Norwegian Nzema Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tongan Turkish Turkmen Twi Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Nei Zvapupu zvaJehovha Zvichiparidzira Vanhu Vakamboti “Hatifariri Zvamunoparidza”?
Zvapupu zvaJehovha zvinofarira kuudza vanhu vese mashoko ari muBhaibheri, kusanganisira vaya vakambotaura kuti, “Hatifariri zvamunoparidza.” Chinoita kuti Zvapupu zvidaro ndechekuti zvinoda Mwari uye zvinoda muvakidzani. (Mateu 22:37-39) Kuda kwatinoita Mwari kunoita kuti titeerere murayiro weMwanakomana wake wekuti ‘tipupure kwazvo.’ (Mabasa 10:42; 1 Johani 5:3) Kuti tikwanise kupupura kwazvo, tinoendesera vanhu mashoko aMwari kanopfuura kamwe chete, sezvaingoitwawo nevaprofita vaMwari vakararama kare. (Jeremiya 25:4) Tinoedzawo kuudza munhu wese “mashoko akanaka oumambo” ayo anoponesa upenyu, kusanganisira vaya vasina kuafarira pekutanga, nekuti tinoda vavakidzani vedu.​—Mateu 24:14.
Tinowanzowana vanhu vanofarira zvatinoparidza patinodzokera padzimba dzatakambosangana nevanhu vaiti havafariri mashoko edu. Chinoita kuti tidaro ndechekuti:
Vamwe vanenge vari pamba ipapo vanogona kufarira mashoko atinoparidza.
Vanhu vanochinja. Zvinhu zviri kuitika munyika kana kuti zvinoitika muupenyu hwevanhu zvingaita kuti vamwe vawedzere ‘kuziva zvinodiwa zvavo zvomudzimu’ kureva kuti vawedzere kuda zvekunamata, votanga kufarira mashoko ari muBhaibheri. (Mateu 5:3) Kunyange vaya vanopikisa vanogona kuzochinja mwoyo, sezvakaita muapostora Pauro.​—1 Timoti 1:13.
Kunyange zvakadaro, hapana munhu watinomanikidza kuti ateerere mashoko atinoparidza. (1 Petro 3:15) Tinodavira kuti munhu mumwe nemumwe anofanira kuzvisarudzira zvaanoda panyaya yekunamata.​—Dheuteronomio 30:19, 20.
Ona zvatinotenda nezvekuponeswa uye kuti kuponeswa kunowanikwa sei.
Tapota ona kuti takasiyana sei nezvitendero zvinozviti ndezvechiKristu.
Jesu akati kune migwagwa yakawanda inoita kuti vanhu vaponeswe here?
Zvapupu zvaJehovha Zvinomanikidza Vanhu Kuti Vasiye Machechi Avo Here?